Muxuu yahay qorshaha RW Kheyre iyo Wasiir Beyle? Maxaa keenay in wax qabad maaliyadeed loo dabaal dego xillo aay ciidankii gadoodsan yihiin? - Muqdisho Online
Home Wararka Muxuu yahay qorshaha RW Kheyre iyo Wasiir Beyle? Maxaa keenay in wax...
Muxuu yahay qorshaha RW Kheyre iyo Wasiir Beyle? Maxaa keenay in wax qabad maaliyadeed loo dabaal dego xillo aay ciidankii gadoodsan yihiin?
Wasiirka Maaliyadda JFS Cabdiraxman Ducaale Beyle ayaa lagu wadaa in uu magaalada Muqdisho ku qabto shir loogu magac daray “Halkee Ka nimid” Wasiirka ayaa shacabka Muqdisho u soo bandhigaya guulaha aay gaartay Wasaaradda Maaliyadda JFS xilli aay ciidamadii xoogga dalka aay ka soo baxayaan furimaha dagaalka mushaar la’aan iyo raashin la’aan aawgeed.
Waxaa maalmo ka hor uu sheegay RW Kheyre in ciidanka la siiyo mushaarkooda, kuwa gadoodsanna aay yihiin ciidan beeleed lagu siin jiray lacag si qaldan, hadalka RW Kheyre ayaa sababay in ciidankii ugu badnaa aay ka soo baxaan furimaha dagaalka.
Weli waxaa dad badani is weydiinayaan ujeedka gaarka ah ee RW Kheyre iyo saaxiibadiis aay ka leeyihiin in aay sii huriyaan colaadda ka dhalatay lunshasha mushaarka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa aaminsan in RW Kheyre oo ah musharaxa 2020 in uu ka shaqeynayo sidii uu sii magac dili lahaa MW Farmaajo oo aanan war iyo wacaal u hayn khiyaanada RW Kheyre iskuna soo xiray gurigiisa. MW Farmaajo aya gebi ahaanba joojiyay imaatinka xafiiska Villa Somalia.
Previous articleImaaraadka oo laga Masaafuriyay nin soo dhaweeyay Dadkii lagu xasuuqay New Zealand
Next articleShaqaalaha Qaramada Midooobay iyo diblomaasiyiinta degan Xalane oo Muqdisho laga daad gureynayo